10ka Waxyaabaha Aan Laheyn Talyaaniga
10ka dal ee ugu khatarsan dalxiisayaasha Talyaaniga
Maxaad Sameyn Kartaa Fasaxa Talyaaniga
Talyaanigu waa dal weyn oo soo booqda mana jirto meelo qurux badan oo soo booqda ama waxyaabo xiiso leh si ay u arkaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo yaryar oo lagu ogaanayo ka hor intaanad ku dhaqaaqin magaalooyinka iyo magaalooyinka Talyaaniga. Dalxiisayaashu had iyo jeer waxay sameeyaan khaladaad yar oo u jebin kara fasaxooda sababtoo ah ma garanayaan wax ka fiican oo ma samaynayaan baaritaankooda.
Sidaa darteed haddii aad rabto in aad dalbato qaxwada, waxaad ku talo jirtaa inaad raacdo tareen ama xirmo gaaban sababtoo ah markaad booqanayso Talyaaniga xagaaga, diyaar u noqo inaad ogaato qaar ka mid ah caadooyinka iyo sharciyada degaanka.
Waa kuwan 10ka dal ee ugu khatarsan dalxiisayaasha markay sameeyaan marka ay booqdaan Talyaaniga.
Gudbinta Tareen Gobollada iyadoon la Aqoonsan Tigidhka
Tikidhada tareennada ee gobolka, ama tigidh kasta oo aan lahayn waqti cayiman iyo kursi loo qoondeeyey, wuxuu u baahan yahay in la ansixiyo (Tikidka tareenka ee Frecce, oo waqtigooda loo qoondeeyay iyo kuraasta ayaa ka mid ah ka reeban). Gaadiidka tareenada ee gobolka ayaa guud ahaan loo isticmaali karaa tareen kasta laba bilood gudahood, markaa taarikadaada ka hor inta aan la dhigin.
Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad heshaa mashiinka ansixinta; cagaaran iyo caddaan ah saldhigyada qaarkood iyo jaalle dadka kale. Riix tikidhkaaga gawska ilaa aad ka maqashid shaabadda la isticmaalay. Taabashadani waxay tigidhkaaga ka dhigeysaa mid fiican ilaa lix saacadood. Looga digo in xitaa dalxiisayaasha lagu ganaaxi doono ganaax lacageed ka hor inta aysan tikidhka tikidhada ka hor marin ka hor inta aysan tareenka tareenka ku jirin
Dalbashada Latte (Markaad rabto Qaxwaha)
Rolle Pass, Trentino. Aldo Pavan / Getty Images
Latte waa erayada Talyaaniga ee caanaha, sidaas darteed haddii aad dalbato latte, gaar ahaan meelaha bannaan dalxiis, waxaad ku dhamaan kartaa galaas caano ah. Haddii aad rabto qaxwaha, waxaad u socotaa bar (taas oo ku taal Talyaaniga maahan meel keliya oo la isticmaalo khamriga). Maskaxda ku hay in meelo badan oo aad ku dari karto adeegga miiska.
Haddii aad rabto qaxwaha dhaqsaha badan, samee sida dadka reer Talyaanigu u sameeyaan oo u istaagaan bar. Makhaayadaha, qaxwaha (sida caadiga ah espresso) ayaa sida caadiga ah loo adeegaa kaliya marka cuntada la cuno (oo ay ku jiraan macmacaanka). Talyaaniga kuma cunaan qaxwada cuntadooda, guud ahaanna ma cabbaan cappuccino ka dib duhurka, inkastoo aad wali weydiisan kartid mid.
Laguugu talagalay inaadan helin bilaash bilaash ah soodhahaaga ama shaashadda aad u badan iyo inta badan cabitaankaaga qabow lama siin doono baraf.
Ku wadida ZTL
Savoca, Sicily. Martyn Goddard / Getty Images
ZTL, xadka xadidan ee xadidan ama xadka xadidan ee xadidan, ayaa ka xaddidan darawalada aan lahayn ruqsad (dalxiisayaal uma qalmaan). Magaalooyinka iyo magaalooyinka intooda badani waxay leeyihiin ZTL, oo ​​sidoo kale loo yaqaanno Aagga Baaskiilka. Centro Storico badanaa waa meel gaadiidka xadidan.
Badanaa kamarad ayaa lagu dhajiyaa albaabka laga galo ZTL, sawirro taarikada liisan ee baabuurta geli. Taas macnaheedu maahan in si dhakhso ah laguu jiidi doono, laakiin dadku waxay soo sheegeen inay tigidhka ku soo dirayaan boostada lix bilood ama sanad kadib (badanaaba shirkadda baabuurta kirada leh). Iska ilaali sawirada kamaradaha xawaaraha marka aad waddo waddanka Talyaaniga , sidoo kale.
Ku taagan jidka tikidhada
Vatican. Galit Seligmann / ArcaidImages / Getty Images
Inta lagu jiro xilliga xagaaga, dadku waxay u istaagi karaan in kabadan saacad ama labo kaliya inay iibsadaan tikidhada si ay ugu tagaan mid ka mid ah indhaha ama madxafyada Talyaaniga . Maalmahan waa wax aad u fudud in la iibsado tikidhada meelo badan oo internetka ah, inkastoo ay u baahnaan doonto qorsheynta safarkaaga hore.
Inkastoo aanad dooneynin in lagugu xiro jadwal adag waxaa jira tikidhada qaarkood oo aad dhab ahaantii u baahan tahay inaad horay u soo iibsato .
Xidhashada Nadaafada Markaad booqanayso kaniisadda
Saint Basilica Basilica, Vatican City. Paul Souders / Getty Images
Kaniisadaha Talyaaniga iyo kaniisadaha ayaa xiiso leh inay booqdaan qaar badanna waxay qabtaan shaqooyin muhiim ah oo farshaxan. Waxaad ogaan kartaa in badankood ay leeyihiin calaamado lagu soo gudbiyo martida inayan gashan dharka gaaban ama garbaha lafaha (inta badan, dadka yurubiyanku ma xidhaan gaaban, ugu yaraan ma aha inta badan sida Maraykanku sameeyo).
Dumarku waxay qaadi karaan qoorta si ay u daboolaan garbaha qashinka marka ay xidhanyihiin dushooda. Laakiin meelo badan, oo ay ku jiraan Vatican, ma aqbalayaan dadka xiran gaaban. Sidaa daraadeed dharkaaga u qorshee si aad ula socoto aragtidaada.
Ku tiirsan Kaliya Kaararka Amaahda ama Jeegaga Jeegaga Safarka
Talyaaniga, waxaa jira meelo badan oo aan weli qaadan kaararka deynta iyo haddii aad ku safrayso American Express waxaad ka heli doontaa meelo yar oo aad u isticmaasho. Makhaayado iyo dukaamo badan oo qoyska ah, sariiraha iyo quraacda, iyo suuqyada dibadda waxay u baahan yihiin lacag caddaan ah. Kaadhkaaga amaahda ayaa laga yaabaa inaanay ka shaqeynin mashiinada sida jaranjarada otostrada . Waa fikrad fiican inaad haysato laba kaararka deynta si aad u isticmaali karto mid ka mid ah dib u soo celinta isla markaana hubi inaad soo wacdo bangiyadaaga intaadan ka tegin si aad u sheegto taariikhaha aad ku jiri doonto Talyaaniga.
Jeegaga safarka ayaa marar dhif ah loo isticmaali karaa helitaanka lacagta caddaanka ah ee Talyaaniga iyo haddii aad hesho meel aad ku bedesho, waxaad u maleyneysaa inaad bixiso lacag. Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo lacagta caddaanka ah waa kaadhkaaga ATM-ka .
Qorshaha Badbaadinta iyo Jadwal-Jadwalka
Xabaalaha Dhexe, Milano. Sidney / Getty Images
Talyaanigu uma shaqeynin sida saacadaha shaqada ka dibna ha filanin wax kasta oo si haboon u socda, gaar ahaan haddii aad tahay jadwal adag. Wakhti u diyaari inaad iska xejisid foorno ama bar ama inaad tagto xaflad ama dhacdo khaas ah oo laga yaabo inaad ku turjunto.
Booqashooyinka Talyaaniga waxay inta badan ogaadaan in qaybta ugu xasuus badan ee safarkooda ay ahayd wax aysan qorsheynin. U guuridda magaalo cusub iyo hudheel cusub maalin walba waa daal iyo waqti badan oo cuno ah oo laga yaabaa in lagu raaxeysto meel meelo dhawr maalmood ah oo runtii ah in la ogaado.
Dheeraad ah ama Ku safrida Xabal Dheeraad ah
Jidka weyn ee Canal Grand oo hogaaminaya saldhigga tareenka Venice. Wanderluster / Getty Images
Inkastoo shandad gaar ah oo weyn oo weyn oo laga heli karo meelo ay ku yaalaan wadooyinka socodka jilicsan iyo hudheelada leh wiishka, Talyaaniga mar walba ma heli doontid waxyaabahan. Dhismayaasha taariikhiga ahi waa la bedeli karaa si ay u sameeyaan meelo qurxoon laakiin badanaaba lama ogola inay rakibaan wiishka. Haddii aadan joogin hudheelada 5-jirka ah, waxaa dhici karta in ay jiri doonto qof qaadaya bacahaaga.
Gawaarida aan duubnayn ayaa waxay ku jiidanayaan boorso adag iyo haddii aad u socoto Venedik, fursadaha ayaad noqon doontaa inaad ka gudubto buundooyinka. Haddii aad ku safraysid tareen, waxaad u baahan doontaa inaad boorsadaada kor u qaado oo aad iska baxdo tareenka.
Ka fikir baco halis ah (ama laba) oo sahlan in la qaado.
Ku kalsoonaanta GPS
Ascent / PKS Media Inc. / Sawirada Getty
Inkastoo haysashada GPS ee baabuur wadidda waxay noqon kartaa mid waxtar leh, ma aha fikrad wanaagsan in lagu tiirsanaado oo kaliya GPS. Waa caadi in Talyaanigu leeyahay magaalo ama tuulooyin dhowr ah (oo ku yaal gobollo kala duwan) isla magacaas. Marka fiiri khariidadaada oo hubi inaad ogtahay midka aad rabto.
Ahaanshaha Dhibanaha Xatooyada
Sawirada Moofe / Getty Images
Sida magaalo kasta, waa inaad ka taxadartaa inaad haysato lacagtaada ama baasaboorka la xaday. Rome iyo Florence waa meelaha ay dalxiisayaashu inta badan ka soo warbixiyaan xayiraadyada alaabta sida boorsooyinka, kamaradaha, baasaboorka, iyo lacagta.
Ilaali indhahaaga ku hay alaabtaada , ha ku qaadin alaabta qiimaha leh ee baakadkaaga oo ka fogow xirashada dahabka. Ka qaad baasaboorkaaga meel adag oo jeebka lagu qaado si aad u gasho oo aadan lacag dheeraad ah kuugu qaadin koontadaada ama boorsada weyn ee aad u baahan tahay maalinta.
Sida loo arko xeebaha ugu fiican ee Sardinia ee Golfo di Orosei
Waqooyiga Talyaaniga ee UNESCO Meelaha Dhaxalka iyo Magaalooyinka
Elvis Presley Aqoonsiga Suuragalnimada 1977
Hotel 48Lex New York: Room kasta waa qolka VIP Club Floor Floor
Laga soo bilaabo Saigon ilaa Hanoi: Gaadhi, Tareen, iyo Duulimaad
Dhaqanka Masiixiga ee Rome
Imisa qof ayaa ku nool Lasegas?
Georgia State iyo Xafladaha Gobolka
Makhaayadaha Crypt's Cathedral ee Crypt
Washington DC Sawirro: Sawirro ka yimid Webiga Potomac
Boosaska ugu fiican ee loogu talagalay socodka
The 10 Best Brooklyn Hotels ee 2018
Xusuusta dagaalkii Kuuriyada Kuuriya ee Washington DC
Turkey Trots in Washington, DC, Maryland iyo Northern Virginia
Moraine State Park iyo Lake Arthur meel u dhow Pittsburgh